﻿ ‘पक्ष विपक्ष नहेरी वडालाई बजेट दिनुपर्छ’ : मणिराम श्रेष्ठ, वडाध्यक्ष
नेपाल अतिकम विकसित देशबाट माथि उठेपछि नाफा घाटा के ?
संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला, १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन
ह्याप्पी बर्थ डे केपी बा
उर्लाबारी घटना : न्याय माग्दै मृतक दाइकी बहिनी सडकमा, साहसको सर्वत्र प्रसंसा
अब इलाममै डायलासिस सुविधा
अब घरमा जे बिग्रिए पनि ३५० रुपैयाँमै मर्मत, बिराटनगरमा सुरु भयो ‘जे–पनि’
‘पक्ष विपक्ष नहेरी वडालाई बजेट दिनुपर्छ’ : मणिराम श्रेष्ठ, वडाध्यक्ष
बुधबार २३, माघ २०७५
इटहरी वडा नं. २० का वडाध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठ जुझारु वडाध्यक्ष हुन् । वडाध्यक्षको रुपमा काम थालेको डेढ वर्ष बितिसक्दा वडा नं. २० मा केके समस्या छन् र कोसँग के अपेक्षा छ भन्ने विषयमा न्युजलयकी सरिता भण्डारीले गरेको कुराकानी ः
आज भोली केमा व्यस्त हुनुन्छ ?
आज भोली वडा त्यसैपनि एकदमै व्यस्त छ । अहिले उपभोक्ता समिति गठन तथा विकास निर्माणका कार्यलाई समयमै सक्ने भनेर उपमहानगरपालिकाको एउटा टार्गेटअनुसार उपभोक्ता समिति गठन त्यसको प्रकृया, गठन, छलफलहरु भइरहेको छ, त्यसैमा व्यस्त छु ।
विकास जुन तरिकाले अगाडि जानुपर्ने त्यसरी जान सकेको त छैन । तर, पहिलेभन्दा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि प्रत्येक क्षेत्रमा मिलाएर विकास निर्माणका कार्य भइरहेको अवस्था छ अहिले ।
वडाको के कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
यो वडाको पहिलो प्राथमिकता भनेको सरसफाई हो । सरसफाइमा वडाले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई सबै जिम्मेवारी दिएको जस्तो महसुस जनतालाई हुन्छ । तर दायित्व निर्वाह अलिकति जनताले पनि गर्दछन् । प्रत्येक शनिबार हरेक टोलहरुमा पनि सरसफाई गर्दैछन् ।
तपाईहरुलाई कर्मचारीले कतिको सहयोग गरिरहेका छन् ?
यो वडामा कर्मचारीले धेरै नै सहयोग गरिरहेका छन् ।
चुनाव अगाडि केके कुराको आश्वासन दिनु भएको थियो र केके पुरा गर्नु भयो ?
मैले दिएका आश्वासनहरु क्रमशः पुरा हुँदैछ । मैले एउटा पार्कको कुरा गरेको थिएँ, खेलकुदको कुरा गरेको थिएँ । २० नम्बर वडामा सार्वजनिक जग्गा नभएको कारण हामीहरुले सार्वजनिक जग्गा भएको ठाउँमा सम्बन्धित निकायसँग माग गर्ने भन्ने निवेदन गरेका छौँ । र नगरकार्यसमितिको बैठकबाट भर्खर पास गरेका छौँ । यस्तै संघीय सरकार र केन्द्रीय सरकारमा अपिल गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अगाडि बढिरहेका छौँ ।
वडाको मुख्य समस्याहरु के के छन् ? र समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला ?
यो वडाको समस्या भनेको पहिला गाविसपछि नगरपालिका भएको अवस्थामा अहिले बनेको कानुनले अलिकति असर पारेको छ । पहिले गाउँ वस्ती हुँदा १०–१२ फिटको बाटो भएकोले घरहरु बनिसकेको अवस्थामा अहिले नगरपालिकाको मापदन्ड अनुसार १६–२० फिट बाटो अनिवार्य भनेको अवस्थामा विकास निर्माणको कार्यलाई अफ्ठ्यारो परेको छ ।
अर्को समस्या भनेको वडामा दुई वटा खोला छ । उक्त खोलाहरुमा सौँचहरु प्रयोग गर्ने, गाई बस्तु बाँधी फोहोर गर्ने कुराहरुलाई एक चरण डोजर लगाएर सरसफाई गरेका छौँ । तर पनि अझै उक्त समस्या समाधान भएको छैन ।
त्यसैगरि बजारको व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ । यहाँ सोमबार र बिहिबार ठुलो बजार लाग्ने हुँदा एम्बुलेन्स, दमकल छिर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसको लागि भर्खरै बजार व्यवस्थापन समिति र प्रहरी प्रशासनले बाटोलाई चौडा बनाउन मद्दत गरेका छन् ।
वडाको विकासको लागि कोसँग के माग राख्नु भएको छ ?
सबैभन्दा पहिले हामीले जिम्मेवारी लिइसकेपछि उचित बजेटहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सुचना जनतासँग पुग्नु पर्छ र जनताको सहभागितामा योजनाहरु बन्नुपर्छ । पिलर जनता नै हो । टोलटोल गाउँगाउँमा जनताले हामीहरुलाई सुचित गरेर हामीले विकासका योजना ल्याउन भनेका छौं । यसैगरी विभिन्न तहका नेतृत्वलाई के भन्छु भने कुनै पनि पक्ष विपक्ष नहेरिकन सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । र सबै वडाहरुलाई आवश्यक बजेट सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा २० नम्बर वडाका जनताहरु विकास निर्माणको काममा सहभागी हुनु भएको छ । हामी जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काममा जति बजेट ल्याएका छौँ र जति विकासलाई हामीले अगाडि बढाईरहेका छौं, त्यसका जनताले प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन् । वडाको विकासको लागि साथ र सहयोग दिने सबैलाई धन्यबाद दिदै आगामी दिनमा अझै साथ पाउने आशा राखेको छु ।
‘बुटिकले तपाइलाई फरक डिजाइन दिन्छ’ : अरमान
‘हतुवागढी ७ देखि ढुङ्गे हुँदै मचुवा सडक विस्तारमा जोड दिएका छौं’
‘हतुवागढी ४ का सबै घरमा बिजुली पुर्याउने तयारी छ’
चिया पिउने कि कफी ?
आईपीओको नतिजा हेर्न नयाँ वेबसाइट
२०७७ फागुन १७ गते आइतवार को राशिफल
बिहे घरमा हमला, चार जना घाइते